Library Talk: Business Model များနှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း - Myanmar Network
Library Talk: Business Model များနှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း
Posted by Mya Thandar Maw on February 16, 2013 at 16:52 in British Council Library Services
Business Model တစ်ခုသည် ကုမ္ပဏီ တစ်ခု၏ တည်ဆောက်မှုနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာတွင် အလွန်အရေးကြီးသည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပါသည်။
Business Model တစ်ခုတွင် ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အမြတ်ငွေ၏ မူလအရင်းအမြစ်များ၊ စားသုံးသူအခြေပြုပုံများ၊ အဖွဲ့အစည်း၏ တည်ဆောက်ထားပုံများ၊ ရှေ့ချမည့်ဗျူဟာများ၊ လက်တွေ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ဖြစ်စဉ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ အစရှိသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခု၏ အခြေခံအချက်အလက်များ ပါဝင်နေပါသည်။
Model တစ်ခုချ၍ ပြုလုပ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများကို အများဆုံးရရှိနိုင်၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့် ဆုံးရှုံးမှုတို့မှ ရှောင်ရှားနိုင်ပြီး ရေရှည်အောင်မြင်သည့် လုပ်ငန်း တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ပါသည်။
ဆွေးနွေးပွဲတွင် အောက်ပါအချက်အလက်များကို အဓိကထား၍ ဆွေးနွေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
Business Model ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်
Business Model နှင့် Business Plan တို့၏ ကွာခြားချက်များ
Business Model ၏ တည်ဆောက်ပုံ အဆင့် ၉ ဆင့် တို့၏အကြောင်းများ နှင့်
Business Model Canvas တို့အကြောင်းများ ပါဝင်ပါမည်။
ဟောပြောပွဲတွင် ဦးဆောင်ဆွေးနွေးမည့် ဆရာဦးမျိုးမင်းသည် UK နိုင်ငံ ABE College အသိအမှတ်ပြု PS Business School ၏ ဥက္ကဌနှင့် ကျောင်းအုပ်ကြီး ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာသည် စင်ကာပူနိုင်ငံ CIM စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းမှ ၂၀၀၉ ခုနှစ် တွင်ကြီးမှူးကျင်းပခဲ့သော International Marketing Competition (IMC 09) တွင် ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းတစ်သင်းကို ဦးဆောင်၍ ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် မြန်မာ့စီးပွားရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း ပြိုင်ပွဲ (MBPC 2010) ကို ဦးဆောင် ကျင်းပပေးခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။
ထို့ပြင် မြန်မာ့လူငယ်ခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည် မြှင့်တင်မှု အစီအစဉ် (YLDP 2012) ကိုလည်း ဦးဆောင်ကျင်းပပေးခဲ့သူတစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။
ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက် ။ ။ ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်
အချိန် ။ ။ ညနေ ၅ နာရီတိတိ
နေရာ ။ ။ ဗြိတိသျှကောင်စီစာကြည့်တိုက်
ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်လိုသူများ စာကြည့်တိုက်ကောင်တာတွင်ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ (သို့) ဤနေရာမှ အွန်လိုင်းဖြင့် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
စာကြည့်တိုက်အသင်းဝင်မဟုတ်သူများသည် နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကဒ် (သို့) နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုယူလာ၍ ဟောပြောပွဲသို့ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
Permalink Reply by Kyaw Sithu Aung@Fred on February 18, 2013 at 15:40
Permalink Reply by kohlamyint on February 18, 2013 at 16:50
Permalink Reply by Zaw Win on February 18, 2013 at 18:42
I would like to thank you very much for your invitation.
Permalink Reply by sansan on February 18, 2013 at 19:06
နားထောင်ချင်ပါတယ်. နေရာလိမ်စာများ သိချင်ပါသည်. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.။
Permalink Reply by Htun Htun Soe on February 19, 2013 at 7:11
Permalink Reply by ayemoh on February 19, 2013 at 10:03
Permalink Reply by Peaceoftrust on February 19, 2013 at 23:32
မန်းလေးက စာကြညါတိုက် အသင်းဝင်ခြင်ပါတယ် သင်တန်းတွေတက်ချင်ပါတယ်မန်းလေးမှာ
Permalink Reply by Yi Lin on February 20, 2013 at 12:05
Permalink Reply by kyaw min on February 20, 2013 at 12:07
နားထောင်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အသံဖိုင်ဖြစ်ဖြစ်၊ စာဖိုင်ဖြစ်ဖြစ်ရချင်ပါတယ်။
Permalink Reply by khin mg htay on February 20, 2013 at 18:26
အသံဖိုင်ဖြင့် နားထောင်လို့ ရမလား၊ အလွန်စိတ်ဝင်စားပါသည်။
Permalink Reply by Ye' Paing Phyo on February 21, 2013 at 1:39
May I be excused to ask one question that might bealibrary member to attend this event?